လောက် BSF BSF forage • Yuri ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေးခွန်းနှင့်အတူကူညီခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn တို့တွစ်တာကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာမှ (shared) SHARE အတွက်လောက် BSF (အနက်ရောင်စစ်သားပျံသန်း) အကြောင်းကိုဖြေကြားပေးပါ မျှော်လင့်ဝန်ဆောင်မှုမျှဝေဤအသိပညာနောက်ပိုင်းမှာအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေစုရှိနိုင်ပါသည်။ Aaamiinn
Black ကစစ်သား Fly
အနက်ရောင်စစ်သား (hermetia illucens) သို့မဟုတ်အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်ပျံသန်း။
ယင်ကောင် အနက်ရောင်စစ်သားတစ်ယောက် (Hermetia illucens) လူသားတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံသူတို့ထိုကဲ့သို့သောယင်ကောင်၏အခြားအမျိုးအစားများအဖြစ်ရောဂါမျိုးဗီဇသယ်ဆောင်ကြဘူးလို့ပဲ။
အသေးစိတ်ကို >> ဖတ်ရှုပါ http://bit.ly/2KTuZu4
ယင်ကောင် အနက်ရောင်စစ်သားတစ်ယောက် (Hermetia illucens) ရောဂါသယ်ဆောင်ကြပါဘူး။
အသားပျံ (Sarcophagidae), Bluebottle (calliphoridae), အိမ်ယင်ကောင် (Musca domestica) ဘေးဥပဒ်ကိုသယ်ဆောင်။
အသက်အရွယ်ယင်ကောင် အနက်ရောင်စစ်သားတစ်ယောက်5အကြားအလွန်မြန်ဆန်လမ်း - 8 ရက်ပေါင်း, အခြားသူများ 30 ရက်ပေါင်းကျော်ယင်ကောင်အသက်ရှင်နေထိုင်နေစဉ်။
ယင်ကောင် အနက်ရောင်စစ်သားတစ်ယောက် အစာကိုစား, ရေသို့မဟုတ်ပျားရည်နှင်းသောက်သုံးခြင်းမှနထေိုငျနိုငျပါဘူး။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူ့အစားအစာထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ခံရဖို့မ အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင် မစားပါဘူး
10 ပေါများမွေးမြူရေးထူးချွန်လောက် BSF မရှိဘဲနဲ့ BAU အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသက်သေပြရလဒ်များကို >> http://bit.ly/2IUBtHg
Black ကစစ်သားယင်ကောင် မစားကြဘူး, သင်၏သားသမီးကိုစားတဲ့ပိုးလောင်းသို့မဟုတ်လောက်ဒါမှမဟုတ်ပိုးဟုခေါ်ကြသည်။
ဘယ်လိုလိင်အရအခွင့်အရေး အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင် သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါ၏ပုံသဏ္ဍာန်မှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
ယောက်ျားလိင် Coaster သို့မဟုတ်နေကြာနှင့်တူလှည့်လည်နေစဉ်။
>> ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်ထုတ်စစ်ဆေး http://bit.ly/2u3GB6p
အဆိုပါ BSF ၏အသက်အရွယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။
လူငယ်တို့ BSF နံရံတစ်ခုဝင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အခက်အတွက်ဆွဲထားနှုတ်ပိတ်ကြတယ်။
တည်နေရာ 99 လောက်ခြံအင်ဒိုနီးရှား >> ထုတ်စစ်ဆေး http://bit.ly/2AadIcv
ယေဘုယျအားဖြင့် BSF ရှစ်ဆယ်ရက်အတွင်းနှစ်ကြား။
အင်္ဂါဇါတ် အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင် အမြီး၌တည်ရှိ၏, ရှည်မြို့ပတ်ရထားပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးသမီးလိင်မြို့ပတ်ရထားတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဆင်တူပါသည်။
ပြားချပ်ချပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နေကြာနှင့်တူ shaped ယောက်ျားလိင် Coaster နေစဉ်။
အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါအားလုံးတက်စိုက်ပျိုးနှင့်မိတ်ဖို့အဆင်သင့်ကြောင်း signifies ပွူအခါ။
သုံးလေးရက်အတွင်း hatching ပြီးနောက်, bsf လူကြီးဖြစ်လာပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့သည်။
အဲဒီမှာ BSF အခြားဝေးပျံ?
အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းအများအပြားယင်ကောင်လောက်ခြံများမှာ အနက်ရောင်စစ်သားတစ်ယောက် မိမိနှင့်အတူမိမိအယင်ကောင်၏အခြားအမျိုးအစားများကိုတွန်းလှန်ပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်ယင်ကောင်တစည်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် အနက်ရောင်စစ်သားတစ်ယောက် အသံ / signal ကို "အမှတ်အသား" သူတို့နယ်မြေထဲ။
ဥပမာ: ကြောင်သို့မဟုတ်ခွေးသို့မဟုတ်ခြင်္သေ့ "peed" ပိုင်နက် meraka သို့မဟုတ်သစ်ပင်များအားဖွငျ့သူတို့ရဲ့ပိုင်နက်အထိမ်းအမှတ်လျှင်။
Bsf ယေဘုယျအား34 ရက်ပေါင်းမှတက်၏အသက်အရွယ်အပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့ရင့်ကျက်။
Bsf လေထုထဲတွင်မိတ်လိုက်ပျံ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကျပ်တည်းစွာလိုက်, ထို့နောက်၎င်းတို့၏လိင်အင်္ဂါများနှင့်လိပ်အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးထပ်ရာထူးနှင့်အတူအရွက်မျက်နှာပြင်မှကျဆင်းခဲ့သည်။
မိတ်လိုက်၏ထို့အပြင်လုပ်ငန်းစဉ်သို့မဟုတ် မိတ်လိုက် သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ back ပြန်ဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသုတ်ရည်ထိ / သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်သနည်း
သုတ်ရည်ထိသို့မဟုတ် bsf လက်ထပ်ထိမ်းမြား5ကြာ - 10 မိနစ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးချင်းစီမှလွတ်မြောက်ရန်။
သူတို့ဘယ်လို spawn သလဲ?
အမျိုးသမီးလိင်မှတဆင့်ပြန်ထွက်သွားသည် Bsf လောက်ကြက်ဥ။
ကြက်ဥ BSF ထုတ်ပေးသောအခါ, BSF လိင်အင်္ဂါထိုကဲ့သို့သောအရွက်, ကတ်ထူပြားတဖဲ့, သစ်သားနှင့်အခြားသူများအတိုင်းကြက်ဥသိုလှောင်မှုမီဒီယာသို့ထွက်ကပ်။
BSF ဘယ်နှစ်ယောက် spawn?
BSF တစ်ချိန်က 500 အကြား lay - 900 ကြက်ဥ, ကြက်ဥ bsf တစ်စပျစ်သီးပြွတ်ကိုခေါ်
Bsf ကြက်ဥ-shaped ဘဲဥပုံအဖြူအရောင်တဖြည်းဖြည်းအဝါရောင်မှအရောင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။
လောက်ကလေး - လူငယ်?
Bsf နာမည်ဆိုးခက်ခဲတဲ့လောင်းမြင့်မားသောကြောင့်ဆားငန်, အရက်, အက်ဆစ်၏ပတ်ဝန်းကျင်၌နထေိုငျနိုငျ (အက်ဆစ်) dan အမိုးနီးယား။
အအေးအပူချိန်နှင့်အစားအစာမရှိခြင်းအတွက်သဘာဝကျကျလောင်း (မလှုပ်မရှား) Air ကို hibernation bsf လိမ့်မယ်နေကြသည်။
အဆိုပါလောင်း - ပိုး?
အသက်တာ၏အတော်ကြာအဆင့်ဆင့်ခံယူဖို့လောင်းသို့မဟုတ်ပိုး bsf ။
သူတို့ရဲ့အသားအရေရဲ့အရောင်၏ Alternative ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။
အဝါရောင်အဖြူရောင်၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ထို့နောက် Brown ။
လောင်းအရှည်မှကြီးထွားနိုင်ပါတယ်ဒါက Ditahap 1,5 ရောက်ရှိနိုင်သည် - 2cm ။
အဆိုပါလောင်းကတည်းကတန်ဖိုးရှိရှိပေါများအစားအသောက်နှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအတွက်, Hatch မှစတင်။
လောက် detrivora သဘောသဘာဝကဘာလဲ?
အုပ်စုတစ်စု detrivora နည်းလမ်းများ ထိုကဲ့သို့သောအပင်များ, အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်, ခြေးနှင့်စက်ရုံစွန့်ပစ်အဖြစ်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းစား။
လောက် bsf အလွန်အကျိုးရှိသောကြောင့်အာဟာရ, အဆီ, ကယ်လစီယမ်, အမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်မြင့်မားကြွယ်ဝသောကွောငျ့။
ဒါကြောင့်ဖြစ်စေတိရိစ္ဆာန်ငါး, ငှက်, တွားသွားသတ္တဝါ, ဝက်, တိရိစ္ဆာန်, အသားစားနှင့်အစုံစားသတ္တဝါများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အစအဦးကိုသင်ပြီးသားတိရစ္ဆာန်များအတွက်အမျိုးအစားများ၏ယင်ကောင်ကြောင်းကိုကောင်းစွာသတိပြုမိကြသည်ကတည်းကအလွန်အရေးကြီးပါသည် အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင် သို့မဟုတ် hermitia illucens ။
လောက်လောက် Vs BSF?
အလွန်လွယ်ကူစွာဆိတ်ကွယ်ရာ BSF အစိမ်းရောင်အနက်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ယင်ကောင်ကသူတို့ကိုပြောပြရန်ကဘယ်လို။
BSF ရှည်လျားသေးသွယ်သောအရပ်။ နေစဉ်ရေတိုနှင့်အဆီအစိမ်းရောင်ယင်ကောင်။
အဆိုပါ pupa ကဘာလဲ?
သေလွန်သောသူတို့သည်များကဲ့သို့ရွေ့လျားခြင်းနှင့်မလှုပ်မပေးသော Pupa သို့မဟုတ်ပိုးလောင်းလောက် pupae ။
ဒီအဆင့်ထဲမှာယင်ကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ, မျက်စိ, ခြေထောက်, ဝမ်းဗိုက်ဦးခေါင်း, အတောင်ပံစသည်တို့ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်
Pupa သို့မဟုတ် Chrysalis အပြောင်းအလဲကိုမတိုင်မီတစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မြင့်ယင်ကောင်ပေါက်အကြောင်းကိုခဲ့သည် အနက်ရောင်စစ်သားတစ်ယောက်.
ကွန်တိန်နာသစ်သားစင် storey ။
လောက် run မထားဘူးရှိမရှိခြေရင်းကွန်ကရစ်အင်တုံ အကယ်. ?
ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ရေကူးကန်ပါလျှင်, အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိရာရေဥတု TSB ရေကူးကန်အပေါ်ပေးထားရပါမည်။
ယင်းအပေါက်၏အရွယ်အစားနှင့်ငွေပမာဏကို set up ချောမွေ့ရေစောင်ရေများအတွက်သေချာပေါက်လုံလောက်သောရပါမည်။
မီဒီယာလောက်လောက်ဟာလောက် feed ကိုကိုယ်နှိုက်များအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖလောင်းကောင်အစာကျွေးတိုင်း, မီဒီယာတဦးတည်းစီစဉ်ထားပေးအပ် - နှစ်ခုအဆတစ်ပါတ်မီဒီယာရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပွတ်နေသည်။
မီဒီယာ kegemburannya လောက်ပုံမှန်အသစ်သောမီဒီယာများ၏ထို့အပြင်ခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်ဘဲ / ငုံး / နွားမ / ဆိတ်သငယ် / ယုန် / ကြက်သား / ဘဲ။
ဘယ်လိုကဒီမှာ >> ကိုကြည့်ပါ http://bit.ly/2CuSxTY
မီဒီယာကိုအလှည့်ပတ်အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်လျှင်, May ။
မီဒီယာ - Kulture
အမှိုက်ပုံးထဲစျေးကွက် >> http://bit.ly/2EF2qAd
ဖွဲနုသို့မဟုတ်ဖွဲနု >> http://bit.ly/2IVj3G3
စွန့်ပစ်ရေနံ >> http://bit.ly/2Nsy9qe
ကြက်ကြမ်းတပြည်ကို။ >> http://bit.ly/2EEktY9
ဆိတ်သငယ်ကိုနောက်ချေး။ >> http://bit.ly/2EA7lCl
ကျွဲနွားနောက်ချေး။ >> http://bit.ly/2RcfxPT
ကျွဲနွားနောက်ချေးငုံး။ >> http://bit.ly/2pRXkI6
ငါမီဒီယာများနှင့်အတူမည်သို့ kasgot ခွဲခြားပါသလဲ
မီဒီယာ, ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင် kasgot ဝိသေသအနက်ရောင်အရောင်နှင့်အတူ kasgot ခွဲခြားရန်, texture သဲ၏ဘောဇဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ဘယ်လိုကဒီမှာ >> ကိုကြည့်ပါ http://bit.ly/2Lpt0OR
အသစ်ကနွားမနောက်ချေး feed ကိုလောက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သလဲ?
ဘယ်လိုကဒီမှာ >> ကိုကြည့်ပါ http://bit.ly/2RcfxPT
ဘယ်လိုအိမ်က / လှောင်အိမ် BSF ကောင်းသော၏လိုအပ်ချက်များကိုကြသနည်း
သငျသညျလောက်ဆက်နေရန်နေရာကောင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များတွေ့နိုင်ပါသည် >> http://bit.ly/2tWfj2o
: ကဲ့သို့သောထောက်ပံ့ပေးရမညျဟုတချို့ကကိရိယာများနှင့် fittings
ကြက်ဥ hatching အချက်များ
ခေါက်ဆွဲလောက် Make လုပ်နည်း
ဂျုံလောက် Make လုပ်နည်း
အတောင့်လောက် Make ရန်ကဘယ်လို
ထောက်ခံချက်လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးတဖြည်းဖြည်းလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်သင်ယူရလဒ်အကျယ်ချဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ခြေလှမ်းတို့က step ။
စျေးကွက်လောက်တလမ်းတည်းဖြင့် feed ကိုလုံးလေးများ purchasing ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကရောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်, အလွန်လွယ်ကူသည်။
သငျသညျတိရစ္ဆာန်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ရတယ်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင် mendatangai နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရပ်မှချဉ်းကပ်နိုင်သည်
Yuri BSF မှရောင်း။
ငတ်မွတ်သောသူအဘို့ Yuri BSF ထောက်ပံ့ငွေရောင်းဖို့ဘယ်လောက်ထွက်ရှာမည်
အဆိုပါထောက်ပံ့ငွေ >> http://bit.ly/2V6gQyX
စျေးကွက်လောက် >> http://bit.ly/2RcS7tQ
အရောင်းလောက် >> http://bit.ly/2ELaFLS
သို့သော်ထုတ်လုပ်မှုုင်အပါအဝင်အောင်မြင်သောသက်သေပြခဲ့သည်သောလေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်, select လုပ်ပါ။
အောက်ပါပူးတွဲလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကို Yuri BSF:
1 ။ PRODUCTION လောက် BSF
သငျသညျ 1,5 လအတွင်းအပေါများရလဒ်များကိုအတူ BAU မရှိဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ BSF လောက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
2 ။ APPLICATION သို့လောက် BSF
သငျသညျအထူး Formula ပိုမြန်ကြီးထွားတိရစ္ဆာန်များစောင့်ရှောက်ဖို့လောက် BSF ရောမွှေလို့ရပါတယ်။
3 ။ လောက်ဈေးကွက် BSF
ရောင်းဖို့ Yuri BSF !!! Yuri BSF ဝယျပါမညျသောကြောင့်သင်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောက်ရောထွေးခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး
Yuri BSF ပြီးသားသင်သည်သင်၏လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့သုံးနိုငျကွောငျးကို Rp100.000.000 မိတျဆှေထောက်ပံ့ငွေပေးစွမ်းသည်။
5 ။ DUTA Yuri BSFANDA တစ်ဦးတည်းမခံရ။
DUTA Yuri BSF သင့်ရဲ့လယ်ယာအပေါ်ကိုတင်ပြဖို့အဆင်သင့်
6 ။ Yuri BSF UNIVERSITY
သငျသညျအနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် bsf ၏ SOP စိုက်ပျိုးမှု (စံစစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း) နဲ့အညီအနံ့မရှိဘဲသေချာ lanjutan.Untuk အဆင့် bsf ခေတ်မီစိုက်ပျိုးစေရန်အထူးလေ့ကျင့်ရေးပေးထားပါလိမ့်မည် Yuri အတွက် UNIVERSITY BSF ။
7 ။ သမဝါယမလောက်အင်ဒိုနီးရှား
အဆိုပါ CSR အစီအစဉ်ကိုတကယ်အနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် bsf စိုက်ပျိုးတဲ့အထုပ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမတတ်နိုင်သောသူတို့အဘို့သာရည်ရွယ်ပါသည်။
10 ။ ဆုတောင်းပြီးရှာခြင်းငှါ
ဒါကြောင့် Yuri BSF အစီအစဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမကဤအဓိက 10 နှင့်9NUMBER ကိုတင်သွင်းခဲ့ကြသောသူအပေါင်းတို့သည်အလုပ်အစီအစဉ်များကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
99 တည်နေရာ Ranch
စစ်ဆေးမှုများ 99 လောက်လယ်ယာနေရာများတွင်အင်ဒိုနီးရှား
ပေမယ့်လူသားတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံပေမယ့်အလေ့အကျင့်ငါတို့သည်ဒါထွက်ထိုကဲ့သို့သောစွန့်ပစ်ရေနံသို့မဟုတ် tofu အဖြစ်အမှိုက်သရိုက်များ, အညစ်အကြေးများနှင့်ရွှံ့နွံအလျော့နှင့်အဆက်အသွယ်အတွက်ဖြစ်နှင့်ကြလိမ့်မည် BSF ။
အစားအစာအလွန်ငယ်ရွယ်လောက်အမှိုက်ကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါနီးပါးအခမဲ့ပေးသောစျေးကွက်, junk ငျးကု, ခြေး, မိလ္လာစက်ရုံကြိုက်နှစ်သက်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
စက်မပါဘဲ, မူးယစ်ဆေးဝါးခြင်းမရှိဘဲ, ကစော်ဖောက်ခြင်းမရှိပဲအတော်လေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သဘာဝကျကျမွေးမြူ။
အဆိုပါခေါက်ဆွဲ၏ပုံစံအတွက်စျေးကွက်အလားအလာလောက်လောက်, မုန့်ညက်လောက်, လောက်တောင့်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏အဘယ်သူမျှမမျှအကျိုးကျေးဇူးများလွန်း bluebottle ကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေအပါအဝင်ရှိ၏။
အောက်ပါဗီဒီယို bluebottle ကနေရေးဆွဲနိုင်အကျိုးကျေးဇူးများဆုံးဖြတ်သည်ဖတ်ရှုပါ။
>> ကိုကလစ်နှိပ်ပါ http://bit.ly/2rQPGio